Ntọala Nhazi Akaụntụ Banyere Akaụntụ
Ntọala Akaụntụ nke mbupu - Ihe Ị Ga-eme
Nzọụkwụ mbụ iji guzobe nke gị nzipụ akụ bụ ka gị na onye ọkachamara nwere ahụmahụ kwurị mkpa gị. Nwere ike ime nke a site na ekwentị ma ọ bụ n'ịntanetị. Kpọsị, ịnwere ike iji ọnụọgụ ma ọ bụ mpempe akwụkwọ a na ntanetị maka mkparịta ụka ya na onye na-ahụ maka ya.
Dị ka nke a, anyị nwere ike ikpuchi ozi ịchọrọ ịnye iji tọọ akaụntụ akụ n'ụlọ ọrụ ndị a ma ama. Ndị otu ndị ọkachamara anyị nwere ike inye nkwado maka imepe akaụntụ akụ ọhụrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla.
Ọ dị mkpa iburu n’obi na imirikiti ebe ndị dị n’akụkụ mmiri ga-achọ onye izizi ruru eru. Nke ahụ bụ onye nwere mmekọrịta na ụlọ akụ. Ọ dabara nke ọma, nzukọ a bụ onye nkuzi ruru eru maka ọtụtụ ụlọ ọrụ ego n'ụwa niile.
Akaụntụ akụ si mba ọzọ na-ezo aka na akaụntụ akụ dị na ikike ebe akara ma ọ bụ onye na-erite akaụntụ ahụ abụghị nwa amaala ma ọ bụ onye obibi. Anyị na-akpọkarị obodo ndị a dị ka ebe nchekwa akụ n'ihi na ha anaghị etinye iwu nke nzuzo ndị ahịa. Mgbe ị mepee akaụntụ akụ Oke showa na otu n'ime iwu ndị si obodo ọzọ dị mma, ị ga-enweta ezigbo ego na nzuzo.
Yabụ, kedu ka ị ga - esi mee nzuzo? Na nkenke, ndị ahịa anyị na-emepe akaụntụ ọhụrụ ha n'aha ụlọ ọrụ ndị nweere onwe anyị nke anyị guzobere. Isi ihe mere eji emepe akaụntụ akụ na mba ọzọ bụ nzuzo na nchebe ngwa ahịa. Enwere uru ndị ọzọ dị ka nhazi ala yana itinye ego na azụmaahịa mba ụwa. Uru ndị a na-achọkarị ngwá ọrụ iwu ziri ezi dị ka LLC na-efe efe. Ihe kachasị ewu ewu na nke bara uru nye ndị na-achọ nzuzo na nchebe nke akụ bụ Nevis LLC.
Otu esi mepee Akaụntụ Banyere Mba Ọzọ
Bankslọ akụ ndị si mba ọzọ nwere oke yiri nke a mgbe ị na-emepe akaụntụ. Ndị ụlọ akụ na-eme nke a iji soro usoro mba ụwa. Nke a gụnyere ozi gbasara gị, njirimara na nkwụnye ego mbụ. Dabere na ụlọ ọrụ ego gị, ụlọ akụ nwere ike jụọ gị maka otu akwụkwọ ikike ngafe gị, akwụkwọ ntụaka na akaebe obibi. Anyị nwere ike imeghe ụzọ maka ụlọ akụ mba ọzọ kachasị ike n'ụwa. N'ihi ahụmịhe dị ukwuu na ịdị ogologo ndụ n'ọhịa, anyị ruru eru ịme ndị ọbịa na ọtụtụ akụ kacha sie ike na Switzerland.
Nke mbu, imeputa ulo oru ndi mba ozo. Mgbe ahụ, open mepee ụlọ akụ n'ụlọ akụmaahịa. Nke a ga-emepe akaụntụ akụ nke azụ gị n'aha nke ụlọ ọrụ na-abụghị nke onwe gị kama ịbanye na aha gị. Ọ bụrụ na ịnwee akụ na aha gị ozugbo, ha kachasị mfe ịchebe ikpe.
Na mgbakwunye, ị ga - enwetakwu nzuzo nzuzo mgbe ị jiri ikike abụọ sitere na mba ọzọ. Hiwere ụlọ ọrụ gị n'otu mba. Mgbe ahụ ị ga-emepe akaụntụ akụ gị na onye ọzọ. N'ụzọ bụ isi, ị na-eji uru iwu nzuzo abụọ nke mba ọzọ. Na mpaghara usoro iwu nchekwa azụmaahịa dị mma, ọ bụ nnukwu iwu inye ndị ọzọ ozi akaụntụ akaụntụ. N'ime ikike ndị ọzọ ọ bụkwa mmejọ mmadụ inye ozi gbasara ụlọ ọrụ gị. Pluslọ ọrụ ahụ na mgbakwunye ego nke ụlọ akụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị ọsọ iji chebe akụ gị pụọ n'anya anya. Maka ozi ndị ọzọ, gụọ, Nweta Banlọ Akwụkwọ Nleba Anya Banyere, ebe ị ga-ahụ ihe ndị bụ isi gbasara ụlọ akụ dị n’okpuru mmiri.
Azụmahịa Banyere Akaụntụ Na-arụ ọrụ
Serviceslọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ Ego (FSC) ma ọ bụ ụlọ ọrụ kwekọrọ na mba ahụ ma ọ bụ mpaghara na-ahazi ụlọ akụ ọ bụla. N'ụwa niile, fortù Na-ahụ Maka Njikọ Akụ na ụba na Mmepe (OECD), European Union na ndị otu ndị ọzọ, na-ekwupụta atụmatụ na chọrọ. Ha nọ n'ọnọdụ maka FSC dị iche iche iji mmanye ya na ụlọ akụ ga-agbaso.
Isi ihe mere iwu ndị a ji na-eme bụ ịhapụ ụmụ amaala na-erube isi n'iwu na ndị ohi. Ọ bụ ya mere enwere akwa chọrọ iji nyere aka gbochie ịchụ ego ma ọ bụ ihe ndị ọzọ iwu na-akwadoghị.
Lee ụfọdụ ihe ndị a na-ahụkarị na-adịkarị mkpa mgbe ị na-atụle mbupụ ala. Banklọ akụ na-akpọ ozi a "ezigbo ọrụ" ma ọ bụ na-ezute "Mara Onye Ahịa Gị" ma ọ bụ ihe ndị KYC chọrọ.
Ihe ụlọ akụ chọrọ
Nke a bụ ọmụmaatụ nke ụfọdụ ihe achọrọ iwu.
1. Ngwa akaụntụ akụ.
2. Kaadị nke aka
3. Otu paspọtụ ahaziri ahazi
4. Ihe akaebe nke adres, dị ka ụgwọ ọrụ mmekọ
5. Akwụkwọ ozi sitere na bank nke onye dị mkpa ya na mmekọrịta akụ na ụba nọkarịrị afọ abụọ
6. Akwụkwọ edemede ọkachamara sitere n'aka onye na-ere ego / Attorney nke onye dị mkpa ka ya na ọkachamara nwee mmekọrịta ọ dịkarịa ala afọ abụọ
Nke a abụghị ndepụta zuru oke. FSC na OECD na akụ, onwe ya, nwere ike ịnwekwu ihe ndị ọzọ. Ọzọkwa, nke a bụ iji kwado iguzosi ike na iwu nke usoro ụlọ akụ ma nyere aka gbochie mpụ. Ndị ọrụ ụlọ akụ ga-elebanye anya na dọkụmentị ahụ ma kpọọ oku ekwentị ka ịmee nyere gị aka ziri ezi.
Dịka ọmụmaatụ, ha ga-achọ ịchọpụta ebe obibi gị. Yabụ, ịchọrọ ụfọdụ ụdị akaebe, dịka ụgwọ ọkụ na aha gị. Dabere n'ụdị akwụkwọ ọ bụla, notarization nwere ike gosi na ọ dị mkpa. Countriesfọdụ mba nwere ike ịchọ ọtụtụ ụdị njirimara tupu imepe akaụntụ ahụ.
Mgbe ị ga-emepe akaụntụ akụ nke ndị nọ n'oké osimiri, ịnwere ike iku ndị ọkachamara ka ha nyere gị aka ime ya. Nzukọ anyị, dịka ọmụmaatụ, na-enye ọrụ a. Ma ọ bụghị ya, ịkwesịrị ime nyocha ihe ụfọdụ iwu achọrọ ma ọ bụ ikike ụlọ akụ ọ bụla. Quora na-ekwu maka 14,600 ụlọ akụ n'ụwa. Yabụ, belụsọ na ịnweghị oge na aka gị, ihe ka ọtụtụ ga-ekweta na ọ kacha mma ịnweta enyemaka nwere ahụmịhe.
Ntughari na akwukwọ
Banyere maka ịtụ akụ, ụlọ akụ nwere ike ịchọ ihe na-egosi mmekọrịta dị mma n'etiti gị na akụ gị. O nwere ike choo ozi dika odika ubochi. N ’oge ụfọdụ, ọnwa isii iji ruo otu afọ ikwuputara ụlọ akụ kwesịrị izu. Banklọ akụ n'ụlọ gị nwekwara ike inye gị akwụkwọ ozi iji zie ozi na-egosi na ị bụ ahịa zuru oke.
Banklọ akụ dị na mmiri nwekwara ike ịchọ ozi gbasara ụdị azụmahịa ịchọrọ ịme. Ndị ụlọ akụ etinyela nrụgide na-abawanye iji kwụsị ịkwanye ego na ọrụ ndị ọzọ rụrụ arụ. Ya mere, a na-arịọ akwụkwọ ndị ọzọ ka ụlọ ọrụ nwee ike ịchọpụta ụzọ isi nweta ego na akaụntụ ahụ. Ọ bụrụ na ha emeghị otu ahụ, ha nwere ike ịnata ntaramahụhụ ma ọ bụ mfu ikike ikike ụlọ akụ. Yabụ, atụkwala anya ka ha wepụrụ gị ihe pụrụ iche.
Ndi Bekee bụ asụsụ obodo nke mba ebe ị na-eme atụmatụ ịmepe akaụntụ akụ gị dị n'èzí? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike ịnye nsụgharị ndị a kwadoro nke akwụkwọ gị na asụsụ gọọmenti.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, usoro a ga - eji setịpụ ego n'ụlọ akụ dị iche iche karịa imeghe akaụntụ ụlọ. Imirikiti ụlọ akụ chọrọ ka ị pụta na ihu. Ọ dabara nke ọma, anyị maara ndị na-amaghị. Ndị na-achọghị njem, ha ga-achọkwu akwụkwọ iji gosi na ị bụ onye ị kwuru na ọ bụ. Nke a baara gị uru. Nke ahụ bụ n'ihi na mgbe ị gara ịrịọ maka ego gị, ị ga-ama na ọ ga-abịara gị; ọbụghị onye na-ekwu na ha bụ gị. Yabụ, site n'inye ID ziri ezi n'ihu, gị na akụ ga-amara na ọ bụ gịnwa n'ezie.
Ebe ọ bụ na usoro dị iche iche site na ụlọ akụ na mba, ọ dị mkpa ịkọwapụta ụfọdụ okwu tupu i mepee akaụntụ ahụ. Ị ga achọ ịma ebe enwere ihe mgbochi na ị na-ebufe nnukwu ego. Ya mere, ị ga-achọ ịmara ụzọ maka ikike dị otú ahụ. Ị ga-achọ chọpụta ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ego kaadị ahụ ga-arụ ọrụ na mba ụwa. Ọ na-arụ ọrụ ma maka ịzụta ahịa azụ na ATM? Chọpụta ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji kaadị akwụmụgwọ akwụ ụgwọ maka ngwaahịa na ọrụ dị n'ịntanetị.
Ọnụ ọmụrụ nwa ọtụtụ ụlọ akụ dị na mba ndị ọzọ na-enye na-adị elu mgbe ụfọdụ karịa nke ụlọ akụ US na-enye. Ihe owuwu a nwekwara ike ịdịtụ elu. Akụkụ nke ịrụsi ọrụ ike bụ ịtụle ụgwọ niile ụlọ akụ kwuru. Ọ bụrụ n’ịchọọghị ịme ọtụtụ mbufe, ụgwọ nwere ike ọ gaghị enwe nnukwu mgbanwe; mana ha nwere ike tinyekwuoro aka na nnabata akụ na-arụ ọrụ.
Ozugbo Akaụntụ Gị meghere
Ozugbo ụlọ ọrụ ahụ debere gị nzipụ akụ akwụkwọ ndozi, ha na-ezigara gị nkwenye site na ozi-e. N'oge ahụ ụlọ akụ ahụ ga-echere maka nnyefe waya. Ozugbo ha nwetara nkwụnye ego mbụ ha ga-eme ka akaụntụ ọhụrụ gị rụọ ọrụ. Expensesfọdụ akwụ ụgwọ gụnyere ụgwọ mmeghe, kaadị akụ ọzọ (ma ọ bụrụ na ọdabara), akwụkwọ ozi na mmefu ndị ọzọ. Ọzọkwa, ndị a ga-adị iche n'etiti ndị na-enye ihe ndekọ ego nke mba ofesi.
Ozugbo akaụntụ akụ na-arụ ọrụ, ị na-enweta nnweta ntanetị iji mepụta akaụntụ ọrụ na paswọọdụ gị. Inwere ike ịnata ihe dịka ngwaọrụ nnabata akara dijitalụ dị mfe iji. Mgbe ị nwetara ya, ịnwere ike ịhụ ngwaọrụ dijitalụ nke na-emepụta koodu echekwara echedoro iji nweta nguzo akaụntụ gị. N'ọtụtụ ụlọ akụ, ị ga-enwe ike ịme azụmahịa ngwa ngwa, ngwa ngwa, na nzuzo na enweghị ntụkwasị obi. Yabụ, ijikwa akaụntụ gị na iji ntanetị na-eme ka ọ yie nke ukwuu na iji akụ akụ n'okporo ụzọ.
Enyemaka dị Ebe a
OffshoreCompany.com enyerela ọtụtụ puku mmadụ aka gburugburu ụwa ịhazi akaụntụ akụ na-akụghị aka. Na mgbakwunye, anyị na-enyere aka ịtọlite ​​akaụntụ nnabata nke ngwaahịa. Ọzọkwa, nzukọ a bụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na-enye atụmatụ nchekwa nchekwa. Ya mere, anyị bụ ndị ọrụ ntụkwasị obi nwere mmekọrịta nke nwere ikike na ikike ikike oke osimiri. Ọ bụrụ n’inwere mmasị ikere òkè na ngalaba oke osimiri, gbaa mbọ kọwaa onwe gị ka i wee mee mkpebi dị mma. Nke ahụ bụ ihe anyị nwere ike inyere gị aka ime.
Ihe Nleba Anya Banyere Ofesi
Bankslọ akụ ndị si mba ọzọ na-enyekarị ọmụrụ nwa ka US bank na Canada. Gbakwunyere na ọtụtụ ndị na-enye ọrụ akaụntụ njikwa ego njikwa. Dinggbakwunye nzuzo bụ otu uru dị na ụlọ akụ dịpụrụ adịpụ. Ọzọ bụ ohere maka itinye ego nke mba ọzọ dị mma. Dinggbakwunye akaụntụ akụ nke mba ọzọ tinyere ngwá ọrụ nchebe ego bụ nnukwu ụzọ iji wee chebe onwe gị ego. Ọ bụrụ naanị ịnwe akaụntụ dị n'okirikiri n'aha nke gị, a gaghị echebe gị. Nke ahụ bụ, onye ọka ikpe mpaghara nwere ike inye gị iwu ka ịgbanye ego ahụ. Jide akaụntụ gị na ọdụ ụgbọ mmiri dị nso na LLC ma ọ bụ ntụkwasị obi bara uru, agbanyeghị tebụl. Ime nke a nwere ike igbochi onye ọka iwu gị ịpụ na akaụntụ gị.
Ozo Banyere Ozo, Mbara Ala
Akaụntụ Ekeresimesi pụtara n'ezie, ịnwe ụlọ ọrụ ego dabere na mba na-abụghị nke gị. Banchụ ego na esenidụt maka ndị America na-abụkarị nchekwa nchekwa ma ama ama. Obodo ndị a gụnyere Switzerland, agwaetiti Cayman, Belize na Luxembourg. N'ihi ya.
Dị ka anyị kwuru, iji akaụntụ akụ na mba ofesi yiri iji akaụntụ ụlọ gị. Nke ahụ bụ, ụlọ akụ ndị dị ná mba ọzọ na-enweta ngwa ngwa site na igwe ATM na njikwa akaụntụ ntanetị.
Akaụntụ Ntugharị Efere na ụlọ ọrụ ego ụwa kachasị nchebe na nke kachasị ike n'ụwa. Jiri otu n'ime akara ekwentị ma ọ bụ mpempe oge ịju ase na ibe a maka ozi ndị ọzọ.
Uru nke Banking Overseas
Enwekwube Akpa Nchedo iwu site na Lawsuits
Na-emeghe n'Ọnụ Ụzọ ka Ọ Bụrụ Ọdịmma Ego
Aka Big nla
Nke a bụ otu nnukwu ego ga - enyere gị aka ịbawanye oge nzuzo ego na nchedo akụ. Nke ahụ bụ, mepee akaụntụ nnabata ndị mba ofesi n'aha ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri. Nke a na-enye ozi nzuzo nke ukwuu ike. E nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi mee ka ihe nzuzo gị dị elu ma chebe akụ gị. Naanị jikọtara ihe ndekọ ego ụlọ akụ, ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi. Dịka ọmụmaatụ, ụkpụrụ Nevis LLC na-enye ike nchekwa kachasị nke LLC ọ bụla n'echiche anyị. Na mgbakwunye, iwu ikpe na-arụtụ aka na Cook Islands Trust dị ka ihe ntanetị kachasị dị nchebe nke nchekwa ngwa ahịa ụdị ọ bụla.
Dị ka ịmara, ichebe akụ na ụba na nzuzo gị adịbeghị mkpa karịa. Ọ dabara nke ọma, ịnwere ike ịnụ ụtọ nzuzo zuru oke na ụgbọ ala nchebe ngwa ahịa na mpaghara nchebe kachasị mma. Ndị na-enye ihe dị ka anyị na-etolite puku kwuru ụlọ ọrụ na ntụkwasị obi maka ndị ahịa ha kwa ụbọchị. Ndị nwe ọhụrụ ha, n'aka nke ha, na-edebe nde kwuru nde dọla n'ụlọ akụ mba ofesi kwa afọ. Dika onye tozuru etozu nke ulo ndi Switzerland ike, ndi otu a enyerela otutu puku ndi ozo aka na anoghi ego. Nke ahụ bụ, nzukọ a na-enyere ha aka ịmepe akaụntụ akụ na mba ofesi. Ya mere, ịnwere ike imepe ha obere nkwụnye ego mbụ mgbe ọkachamara nwere ahụmahụ na-eduga ụzọ.
The IRS na-atụ ndị US ụtụ isi ego zuru ụwa ọnụ. Yabụ, jide n'aka na ị na-achọ nduzi nke onye CPA nke nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara ụtụ isi. Are na-achọ ụzọ iwu ga-esi chekwa akụ? You na-arụ ọrụ nke usoro dị mma na nke iwu kwadoro? Ọ bụrụ otu a, nweere onwe gị iji nọmba ma ọ bụ ụdị enyere na ibe a.
Ebumnuche iwu naanị
Ekwuru ihe edere na nghọta site na iji ụlọ ọrụ na akaụntụ akụ na-eji naanị maka ebumnuche iwu. N’ozuzu, a na-atụ ụtụ ndị US na-akpata ego zuru ụwa ọnụ. Yabụ, nchedo akụ pụọ na ihe puru iche, vetikal A na-anabata ndị ịgba akwụkwọ n'ụlọ ikpe oge niile. Agbanyeghị, mpụ ụtụ ụtụ ma ọ bụ iji ihe dị n’elu kpuchie ego enyereghị iwu abụghị ebumnuche nke isiokwu a. Yabụ, anyị were gị na ị bụ nwa amaala na-erube isi yana ebumnuche gbasara iwu. Ọ bụrụ ee, iji ọrụ ndị dị n'elu nwere ike ịnye ego nzuzo na nchedo bara uru ị na-achọ.
<Isi nke 7
Isi nke 9>